တန်းဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အသည်းကျန်းမာရေးအတွက် သိလိုသမျှ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
တန်းဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အသည်းကျန်းမာရေးအတွက် သိလိုသမျှ
Assoc. Prof. Teerha Piratvisuth, M.D.
အသည်းရောင် အသားဝါ-စီပိုးကို ကုသလို့ ရနိုင်လား
စီပိုးကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးလို့ ရနိုင်သလဲ?
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆစ်မီတဝေ့ ၈မိုင် ဆေးခန်းမှ လူနာများအတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကို ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ ဒါကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံကြီးမှ ဆရာဝန်များနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုလေးကတော့ လူနာတွေက ထိုင်နိုင်ငံ ဆစ်မီတဝေ့ ဆေးရုံကြီးရှိဆရာဝန်များကို Video Call ကနေတစ်ဆင့် တွေ့မြင်နိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးဆွေးနွေးမှုကိုခံယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရှိနေပေမယ့်လည်း စကားပြောနိုင်ပြီးတော့ ကျန်းမာရေးအတွက် ထိရောက်တဲ့အကြံပေးချက်တွေကို နားထောင်နိုင်မှာပါ။
ဒီနည်းလမ်းက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ လူနာတွေကို အခုလိုမျိုး အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကနေ နိုင်ငံရပ်ခြားကို တကူးတက ခရီးသွားနေစရာမလိုပဲနဲ့ ကျွမ်းကျင်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ဆေးပညာရှင်တွေနဲ့ တိုက်ရိုက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ခရီးသွားစရိတ်တင်မဟုတ်ပဲ ခရီးသွားဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ရတဲ့ အချိန်ကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။
လူနာကို စည်းကမ်းတကျချည်းကပ်ပြီးတော့ တိကျတဲ့ ဆေးပညာသတင်းအချက်အလက်တွေကို အခြေခံပြီးကုသတာဖြစ်တဲ့အတွက် လူနာအနေနဲ့ တိကျမှန်ကန်တဲ့ စစ်ဆေးမှုနဲ့ ကုသမှုကို လက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ဆရာဝန်ကို Facebook ကနေ တစ်ဆင့် ရက်ချိန်းကိုရယူနိုင်ပြီး တွေ့နိုင်တဲ့အတွက် အလွန်သက်သာလွယ်ကူပြီးတော့ အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးဟာ သင့်လက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်။
ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုလည်းရှိတဲ့အတွက် ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တဲ့အခါမှမှာလည်း အစဉ်ပြေလွယ်ကူစေပါတယ်။
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း၏အဖြေများ – သွေးစစ်ဆေးမှုအဖြေ နှင့်/(သို့) အာထရာစောင်း ရိုက်ထားသော အဖြေများကို ပြင်ဆင်ထားခြင်း ( ၃ လ အတွင်း)
ရရှိထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ဆရာဝန်တွေဟာ ဖြစ်စဉ်ကို လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးစစ်ဆေးမှုမှာ ဆေးစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ ကုသခြင်းအစီအစဉ်တွေကိုပြုလုပ်မှသာ လူနာကို ကျန်းမာရေးအကြံပေးဆွေးနွေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စည်းကမ်းတကျ ချဉ်းကပ်နည်းကြောင့် လူနာတွေဟာ မှန်ကန်တဲ့ စစ်ဆေးမှု နဲ့ ကုသမှုကို ရရှိတယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုကို ရထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ Samitivej Hosptial – ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံကြီးရဲ့ Facebook စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ ( https://www.facebook.com/samitivejmyanmar ) ကို သွားပါ။
Message Inbox ကနေတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Facebook Admin ကိုရက်ချိန်းရယူဖို့ ချိန်းဆိုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Facebook Admin ကနေ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကို ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားဖို့ မေးမြန်းပါလိမ့်မယ်။
(ခ) ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်
ကျွန်ပ်တို့ရဲ့ Facebook Admin မှ ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်မည့် နေ့ရက်နဲ့အချိန်ကို ဆက်သွယ်ပြီး အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။ လူနာမှ ယခင်က ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ချက်မှရရှိသောအဖြေများ၊ သွေးစစ်ထားသောအဖြေများ၊ အာထာရာစောင်းရိုက်ထားသော အဖြေများကို တပါတည်းယူဆောင်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာဝန်ကြေး ၄၅,၀၀၀ – ၈၇,၅၀၀ ကျပ် (လူနာကျန်းမာရေးအခြေအနေဆွေးနွေးမှုအချိန်ပေါ်မူတည်ပါသည်။)
လူနာအတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်ခ – ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
လူနာတွေအနေနဲ့ နောက်ထပ် စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုရင် စစ်ဆေးမှုအားလုံးအတွက် ကျသင့်မယ့်ပမာဏကို ဆေးခန်းမှာရှိတဲ့ သူနာပြုကနေတစ်ဆင့် စစ်ဆေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အသေးစိတ်သိရှိလိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Admin ကို ယခုပဲ Facebook Page ကနေ တစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါပြီ။
AppointmentGeneral InquiryOther question
User rating: 3.14 out of5with 14 ratings
မည်သည့်အထူးကုမဆိုChildEyePsychiatrySkinBrainHealth Check-upRehabilitationSurgery & Plastic SurgeryFemale reproductive systemEar Nose ThroatBone & SportGeneral MedicineBlood and CancerGut, LiverJoint & AutoimmuneThyroid, Pancrease, and other glandsInfectionKidneyAllergy & ImmunologyLungHeartTooth & GumUrologistOthers